Ngemuva kokuhlala isikhathi eside embonini yama-silicone, amakhasimende amaningi azowuzwa lo mbuzo: imikhiqizo yama-silicone enosayizi ofanayo noma isakhiwo esifanayo inamanani ahlukile.
Ngemuva kokuhlala isikhathi eside embonini yama-silicone, amakhasimende amaningi azowuzwa lo mbuzo: imikhiqizo yama-silicone enosayizi ofanayo noma isakhiwo esifanayo inamanani ahlukile. Kulesi sihloko, bekukhona ukuthi bengikhathazekile isikhashana. Ukuxazulula le nkinga, ngaphezu kwe-learnin ...
1. Ngokuya ngosayizi wevolumu yezokuthutha, ihlukaniswe yaba: B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 amamodeli ajwayele ukusetshenziswa njengeB1400 (B imele ububanzi, ngamamilimitha). Njengamanje, umthamo omkhulu wokukhiqiza wenkampani ibhande elihambayo le-B2200mm. 2. Ngokwe u ...
Isizathu sebhande eliphukile
1. Isizathu sebhande eliphukile (1) Ukungezwani kwebhande elihambayo akwanele (2) Ibhande elihambayo selisetshenziswe isikhathi eside futhi liguga kakhulu. (3) Izingcezu ezinkulu zempahla noma zensimbi ziphihliza ibhande lokuhambisa noma ujamu. (4) Ikhwalithi yokujoyina ibhande elihambayo ayihlangani ...